Teny notsongaina 22 momba ny fahatsapana hanampiana anao hifandray aminao hatrany - Quotes
Manana fahaiza-manao rehetra isika, saingy tsy mora foana ny matoky azy sy manaraka ny toroheviny.
Ao amin'ny tontolo iray izay toa manome lanja ny famakafakana mandanjalanja noho ny fahatsapana mora vidy, dia matetika isika no manalavitra ny vavonintsika sy mankamin'ny saintsika fisainana.
ny fomba hametrahana ny fihetseham-ponao amin'ny teny
Saingy olona lehibe tsy tambo isaina no nidera ny hatsaram-panahin'ny fahatsapana fiderana nomen'izy ireo nidera ny maha-ilaina azy io rehefa nitady hanamafisana ny tari-dalan'izy ireo manokana.
Ireto ny sasany amin'ireo teny nalaina mahaliana sy manazava indrindra momba ilay lohahevitra izay hanampy anao hatoky bebe kokoa ny tsinainao amin'ny ho avy.
Mino ny fiasan-tsaina sy ny aingam-panahy… Tsapako indraindray fa marina aho. Tsy fantatro fa izaho. - Albert Einstein
Ny faharanitan-tsaina dia tena fanatsobohana tampoka ny fanahy ao amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao. - Paulo Coelho
Arakaraka ny itokisanao ny fampiasa anao no ahazoanao hery bebe kokoa dia hitombo ny tanjanao ary ho sambatra ianao. - Gisele Bundchen
Ny fahiratan-tsaina dia mpampianatra ara-panahy ary tsy manazava, fa manondro ny lalana fotsiny. - Florence Scovel Shinn
Henoy ny feonao anaty… fa loharanom-pahendrena, hatsarana ary fahamarinana lalindalina sy mahery mamakivaky anao izy io… Mianara hatoky azy, matokia ny fisainanao, ary amin'ny fotoana mety dia ho tonga ny valiny amin'izay rehetra tadiavinao ho fantatra, ary hisokatra eo alohanao ny làlana. - Caroline Joy Adams
Ny fahakingan-tsaina dia avy amin'ny olona iray manontolo, avy amin'ny toerana izay misy ny mahatsiaro tena sy ny tsy mahatsiaro tena. Ny valin'ny vokatry ny fahatsapana sy ny fahatsapana rehetra dia miseho ho azy amin'ny alàlan'ny fahatsapana. Ny fahakingan-tsaina dia maneho ny fahatsapana fa ny fitenenana dia miavaka ary mifanaraka tanteraka amin'ny filan'ny fotoana. - Michele Cassou
Misy zavatra lalina sy saro-pantarina izay tsy misy afa-tsy ny intuition irery ihany no mahatratra azy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana antsika olombelona. - John Astin
Hita fa ny fahaizantsika misaina dia jeneraly lehibe kokoa noho isika. - Jim Shepard
Mila vonona ny hamela ny fisainantsika hitarika antsika isika, ary avy eo vonona ny hanaraka an'io torolàlana io mivantana sy tsy amin-tahotra. - Shakti Gawain
Rehefa tonga eo amin'ny faran'ny zavatra tokony ho fantatrao dia ho eo am-piandohan'ny zavatra tokony ho tsapanao. - Kahlil Gibran
Atsaharo ny fanandramana hampiasa ny sainao amin'ny zava-drehetra. Tsy hitondra anao ho aiza izany. Miaina amin'ny fahatsapana sy aingam-panahy ary avelao ho fanambarana ny fiainanao manontolo. - Eileen Caddy
Ny faharanitan-tsaina dia hilaza amin'ny saina misaina izay hitodihana manaraka. - Jonas Salk
Ny lehilahy ambony rehetra dia manan-talenta. Fantany fa tsy misy fanjohian-kevitra na famakafakana, izay tokony ho fantatr'izy ireo. - Alexis Carrel
Ny fahiratan-tsaina dia ny lozika supra mahery izay manapaka ny fizotry ny eritreritra mahazatra rehetra ary miala avy eo amin'ilay olana mankany amin'ny valiny. - Robert Graves
Ny fahiratan-tsaina dia mahita amin'ny fanahy. - Dean Koontz
Mety misy lanja be toy izany amin'ny indray mipy maso toy ny tamin'ny volana famakafakana marina. - Malcolm Gladwell
Fanononana 40 manome aingam-panahy momba ny fiainana azo antoka hanadiavana ny andronao
Aza manandrana mahatakatra amin'ny sainao. Tena voafetra ny sainao. Ampiasao ny intuition-nao. - Madeleine L'Engle
Voafetra ny fotoananao, ka aza laniana amin'ny fianan'ny olon-kafa. Aza voafandriky ny dogma - izay miaina miaraka amin'ny valin'ny fisainan'ny olon-kafa. Aza avela hilentika ny feonao anaty ny tabataban'ny hevitry ny hafa. Ary ny tena zava-dehibe dia mahereza hanaraka ny fonao sy ny fonao. - Steve Jobs
Henoy ny fihetsikao. Hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra. - Anthony J D'Angelo
Hall of laza 2019 wwe
Raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra no miresaka aminao. - Dr. Wayne Dyer
Averinao ny intuition-nao rehefa manome toerana ho azy ianao, rehefa ajanonao ny resaka misafotofoto ao an-tsaina. Tsy mamelona anao ny saina misaina. Heverinao fa manome anao ny marina izy io, satria ny saina misaina no ilay zanak'omby volamena ivavahan'ity kolotsaina ity, saingy tsy marina izany. Ny fahaiza-mandanjalanja dia manosika betsaka izay manankarena sy be ranony ary mahavariana. - Anne Lamott
Misy feo tsy mampiasa teny. Mihainoa. - Rumi
Iza amin'ireo teny nindramina ireo no tianao? Mametraha hevitra etsy ambany hampahafantatra anay!
ny fomba hamerenana ny vadinao taloha amin'ny vehivavy hafa
ny fomba hialana amin'ny mangidy
ahoana no hanovako an'izao tontolo izao
torohevitra momba ny fifandraisana tsara omena namana